Kachin Duwa: အာဏာရှင်များရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များ
အာဏာရှင်များရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များ
အာဏာရှင်များသည် အကျိုးတူ နောက်လိုက်အမာခံများ ရှိခြင်းကြောင့် အာဏာတည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်များ အတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရာမှာ အာဏာတည်မြဲဖို့သာ ဖြစ်သည်။ အာဏာတည်မြဲဖို့ မည်သည့် နည်းမဆို လက်တွန့်မနေတော့ပေ။ သူတို့ အဓိက သုံးတတ်သော နည်းစနစ်မှာ နောက်လိုက်များ အပေါ် မဟုတ်မမှန် ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ပြီး အုပ်ချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးကို နိုင်ငံ့အကျိုး ဖြစ်သယောင် ပြောသည်၊ ကိုယ်ပိုင်အာဏာ ကို နိုင်ငံ့ အချုပ်အချာ အာဏာ ဖြစ်သယောင် ဟောသည်။ ကိုယ့်သိက္ခာကို နိုင်ငံ့သိက္ခာဟု သုံးနှုန်းသည်။ ကိုယ့်ကို ဝေဖန်ရင် နိုင်ငံတောင်ကို ဝေဖန်သယောင် ပြောတတ်လေသည်။
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာ လူဖြူ များက Apartheid ဥပဒေနှင့် လူမည်းများကို ခွဲခြားအုပ်ချုပ်စဉ် လူဖြူ အာဏာရှင် အုပ်စုက လူဖြူ အားလုံးအတွက် လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်ဟန် ပြောသည်။ နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား နှင့် အာဖရိက အမျိုးသား ကွန်ဂရက် မှ The Freedom Charter ဆိုတဲ့ စာတမ်းတခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ ကွန်မြူနစ် စာတမ်းဟု သမုတ်ပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
မန်ဒဲလား ထောင်မှာ ရှိစဉ် သူ့သား သေတော့ ထောင်မှူးကို သူကိုယ်တိုင် သင်္ဂြလ်ခွင့်တောင်းတယ်။ ထောင်မှူးက သူတို့ကို "ခင်များတို့ ကွန်မြူနစ် အဖွဲ့တွေ လာကယ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ" လို့ပြန်အမေးခံရတော့ ဘယ်က ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ကို ဆိုလိုတာလဲ? လို့ မေးပြီး တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ "ခင်များ The Freedom Charter" ကို ဖတ်ဖူးလား" လို့ မေးလိုက်တယ်။ ထောင်မှူးက မဖတ်ဖူးဘူး လို့ ဖြေတယ်။ ဒီတော့ ဘာလို့ မဖတ်ကြည့်ပဲ အသလွတ် ကွန်မြူနစ် လို့ ပြောတာလဲ? လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ထောင်မှူးပြောတာက အားလုံး ဒီလိုပဲ ပြောကြတာပဲ တဲ့။
တကယ်တော့ The Freedom Charter စာတမ်းဟာ အားလုံး တရားမျှတ တဲ့ နိုင်ငံမှာ အတူတကွယဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး လမ်းပြမူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်များ ထုံးစံ အတိုင်း နောက်လိုက်များကို မဟုတ်မမှန်ဝါဒမှိုင်း တိုက်ထားခြင်း ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဖက်ဒရယ် ဆိုရင် ခွဲထွက်ရေး ဆိုတဲ့ ၀ါဒ မှိုင်း တိုက်ထားတာ အခုထိ မပြေသေးပေ။ ပင်လုံစာချုပ် ကို ပင် ရန်သူ့ လက်သုံးစကား အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာ အခုထိ ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျဆုံးခန်းဟာလဲ အာဏာရှင်များရဲ့ လိုရာဆွဲသွင်းရာ လိုက်ပါသွားတဲ့ နောက်လိုက်များရဲ့ အင်အားကြောင့် ဖြစ်လေသတည်း။
Labels: အတွေးအမြင်, ဝေဖန်ရေးရာ
ဘော်လုံး (အားကစား) နဲ့ နိုင်ငံရေး ဆက်နွယ်မှု
ဆီးဂိမ်း မှာ မြန်မာဘော်လုံး အသင်း ရှုံး တာကို တော်တော် ခံပြင်း ကြပါတယ်။ တခါမှ မရှုံးဖူးပဲ ရှုံးရတာဆိုရင် တမျိုးပေါ့။ အခုတော့ မြန်မာ့ ရှုံးပွဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုကို ဝေဖန်ချင်ပါတယ်။
"အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲစီမံကိန်းများကိုတစ်ဖက်သတ်ဖျက်သိမ်းပါက နိုင်ငံတကာ၏ ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးနိုင်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆို" ( Freedo...
ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ (Federal Democracy) ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသား များအတွက် သီးသန့် မဟုတ်ပါ
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်မီး မငြိမ်းနိုင်ခြင်းသည်၊ ခေတ်အဆက်ဆက်အရိုးစွဲနေပြီ ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး ကို...
မြန်မာ ဆုိုတဲ့ ဝေါဟာရ
မြန်မာ ဆုိုတဲ့ ဝေါဟာရ သည် ပြည်ထောင်စု တုိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့ ဆုိုင်တယ်။ ဆုိုလုိုချင်တာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခုိုင်၊ ရှ...
ဘာသာတရားတခုရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ နုိုင်ငံ့အကျိုးပြုပုံ ဆက်နွယ်မှု
ကမ္ဘာမှာ နုိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု နဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ဆက်စပ် နေတယ်၊ တဖက်မှာလဲ မနုဿ (Human) စိတ်မနော (moral) အရင်းအမြစ် (resources) ကြောင့် ချ...
အမေရိကန်တပ်မတော် Gen. Crutchfield မှ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ် (National Defense University) တွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း
~၂၅ ရက်၊ ဇွန်လ ၂၀၁၄ အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာနေ့လယ်ခင်းပါ။အားလုံးနဲ့ဒီနေ့အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီမှာ...
အခွင့်အရေး နဲ့ တာဝန် ၀တ္တရား
(Rights and Responsibility) မြန်မာပြည်မှာ အွန်လုိုင်းပေါ်မှာ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်းက ငြင်းခုန်လာတဲ့ စာသားတခု အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တင်ပြလုိုပါတယ်။ ...
ချင်းတိုင်းရင်းသူတွေ ကျား-မ တန်းတူအခွင့်အရေး ခြေလှမ်းသစ်
နယ်စပ်မှာ လူကုန်ကူးမှုများနေဆဲလို့ ရဲမှူး ပြော
ဘရကျဇဈနဲ့ ဝနျကွီးဖွဈလာပွီး ဘရကျဇဈကွောငျ့ပဲ ရာထူးက ထှကျသှားရသူ - ထရီဆာမေ
လောင်းကစားဝိုင်းများကို ဆက်လက်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးပြော
လမိုငျးမွို့ ငှစေုမဲလလေံဒိုငျဆှမြေိုးတဈဦးအား လကျနကျဖွငျ့အတငျးအကွပျချေါဆောငျသှားသူ ၃ ဦးကိုဖမျးဆီးရမိ
မန်းမဟော်သဓာ အမျိုးသားရေး ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကော်မတီဝင်များကို ရုံးထုတ်
တိုက်ပွဲကြားပိတ်မိသည်ဟု ယူဆရသည့် ရွာသား (၃) ဦး ယနေ့ထိ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ
အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ရေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတြ...
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခါးသီး နေသူမျ...
လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမို ဟာ မြန်မာ့အမျိုးသားရေး ရန်...
အကောင်းမြင်မခံရတဲ့သူများရဲ့ နောက်ကွယ်က ကောင်းခြင်း...
ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိဖို့တော့ မကြိုက်.. သူများဆီကိုတော့သ...
SEA Games 2013 မှာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာ့သတင်းများ။
KIA နဲ့ မူဆလင် ကို တွဲထားခြင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျာ...
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး ဆိုတာ တကယ်မရှိတဲ့ လူမျိုးက...
ခရစ္စမတ် ကို တော်လှန်ရေး အမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း